Qeerroon Bilisummaa Oromoo Jala Deemtota OPDO akeekkachiise | QEERROO
Qeerroon Bilisummaa Oromoo Jala Deemtota OPDO akeekkachiise
SQ: G/W/Liixaa aanaa Jaarsoo keessatti eda galgala (06/10/2010 EC) waraqaan jala deemtota OPDO akeekkachiisu guutumaa magaalaati fi gandollee baadiya hundaa keessatti raabsaa buluu isaanii qeerroon aanaa Jaarsoo gabaase.
Qeerroon aanaa Jaarsoo dhiyeenya kana walgahee haala yeroo fi sochii diinaa fi QBO aanicha keessatti gaggeeffamaa jiru gamaaggamuun taarkaanfii itti aanee fudhatamuu qabu akeekuun irbuu isaanii haaromsachuu isaanii maddi SQ yaadachiisuun akeekkachiifni kenname kun qaama hojii akeekamee keessaa tokko ta’uun beeksiseera.
OPDOn aanaa Jaarsoo maqaa gaaromsaan namoota Uummanni hin barbaanne muudaa jiran atattamaan akka dhaabanii kanneen maqaan isaanii asii gaditti tarreeffame yoroo torbaan tokkoo jin caalke keessatti kaasuun kanneen Ummata biratti fudhatama qabaniin akka bakka buusan dhaamaniiru. Haaluma kanasn
1. Ob. Geetaachoo Dhibbisaa I/G/W/ Inveestimentii
2. Ob. Geetaachoo Galataa I/G/W/IMX
3. Ob. Gammachuu Qixxaaxaa I/A/I/G/W/ barnootaa
4. Ob. Abdiisaa Dabalaa I/G/W/ kominikeeshinii
5. Ob. Soorii I/G/W/Lafaa fi
6. Ob. Dambalii I/G/W/ Gawaasummaa kanneen jedhaman guyyaa jedhame keessatti yoo hin kaafne Qeerroon Bilisummaa Oromoo tarkaanfii mataa isaa kan fudhatu ta’uu beeksisuun tarkaanfii fudhatamuuf kan itti gaafatamu OPDO ta’uus hubachiifni kennameera.